ကလိုစေးထူး: တော်ရာမှာနေရတဲ့အခါ... (၂)
ဒုက္ခသည် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး စကားလုံးက မြန်မာတွေအတွက်တော့ အင်မတန်မှ အောက်ကျတဲ့ စကားလုံး၊ သိမ်ငယ်တဲ့ စကားလုံးလို့ အတော်များများက သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲပဲ UNHCR မှာ စစ်ဘေး၊ နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည်အဖြစ် တောင်းခံ လျှောက်ထားသူတွေကို မြန်မာပြည် လက်ရှိအာဏာပိုင်တွေက ပြက်ရယ်ပြု လှောင်ပြောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါတင်မက တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေလို့ အထင်ကရ နာမည်ကြီးတဲ့ ကေအင်န်ယူ၊ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် အစရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလဲ ဒုက္ခသည်အဖြစ် UNHCR ထံမှာ လျှောက်ထားခြင်းကို ယခင်က အတော်လေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အနေအထားနဲ့အတူ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ သဘောထားရပ်တည်မှုတွေက တနေ့တခြားနဲ့ မွေးရပ်မြေ မြန်မာပြည်ကို နောက်ထပ် လူတွေအတော်များများ စွန့်ခွာစေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ စစ်ဘေး၊ နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည်တွေအပေါ် တနေ့တမျိုး ဆိုသလို ပြောင်းလဲလေ့ရှိတဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေရဲ့ ပေါ်လစီတွေကြောင့်လည်း တတိယနိုင်ငံဆိုတဲ့ အိပ်မက်ဟာ အခြေအနေတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တခု ဖြစ်လာခဲ့တာဆိုရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
UNHCR ဟာ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် တိမ်းရှောင်လာရတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို နယ်စပ်က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ နေရာချထားပြီး စောင့်ရှောက်ထားလေ့ အပြင် နောက်ထပ် အလုပ်တခုကတော့ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး အစရှိသဖြင့် တစုံတခုသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်ရှိ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မယ့် အရေးကနေ လွတ်ရာ လွတ်ကြောင်း တိမ်းရှောင်လာရသူတွေကို စိစစ်လက်ခံရတာပါပဲ။
ဒုက္ခသည် အဖြစ် စိစစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတွေကိုတော့ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံခေါ်ယူလေ့ ရှိတဲ့ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတေးလျ တို့အပြင် ဥရောပ နိုင်ငံ အချို့ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်၊ နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန် အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီကို `တတိယနိုင်ငံ´ အဖြစ် သတ်မှတ်လို့ Resettlements အနေနဲ့ ပေးပို့ပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တော်ရာမှာ နေရတဲ့အခါ…။
ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ကို လက်ခံခေါ်ယူလေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေအနက် ဒုက္ခသည် အင်အားအများဆုံး လက်ခံခေါ်ယူလေ့ရှိတာကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံပါပဲ။ ဒုက္ခသည်တွေ အားလုံးအနက် ၅၀% ကို အမေရိကန်နိုင်ငံက လက်ခံခေါ်ယူလေ့ ရှိတယ်လို့ မှတ်သား သိရှိရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၅၀%ကိုမှ တခြားသော နိုင်ငံတွေက ခွဲဝေ လက်ခံကြတာပါ။
အမေရိကန် နိုင်ငံဟာ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံရာမှာ `လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု´ ဆိုတဲ့ အချက်အပြင် လူသိရှင်ကြား ဖော်ပြမထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ တခြားသော ရည်ရွယ်ချက် တခုကတော့ သူတို့ နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံအလုပ်သမား လိုအပ်ချက်နေရာတွေမှာ သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းတာပါပဲ။
တခြားသော နိုင်ငံတွေထက်စာရင် အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်လာကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေး တခုကတော့ `မိမိခြေထောက်ပေါ် မိမိ ရပ်တည်နိုင်ခွင့်´ အခွင့်အလမ်းက တခြားနိုင်ငံတွေထက် စာရင် ပိုမိုများပြားတာပါပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်း အလုပ်လုပ်နေသမျှ သူတို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ မခြား မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ ရပ်တည်နေနိုင်တာဟာ နှစ်ရှည်လများစွာ သိမ်ငယ်ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ ယုံကြည်မှု ပိုများလာစေဖို့ အချက်တချက်ပါ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ ဒီဘက်ကာလပိုင်းတွေမှာတော့ နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည်တွေထက်စာရင် စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် နယ်မြေစွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်လာကြရတဲ့ ကရင်လူမျိုး ဒုက္ခသည် အတော်များများဟာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေက တဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပို ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:12 PM
I like your attitude towards work and work ethics man!! Way to go!!
Feb 28, 2008, 12:08:00 PM
တော်ရာမှာ နေရတဲ့အခါ... (၁)
နိုင်ငံခြား သွားမယ်ဆိုရင်… (၃)
မရေးဖြစ်တဲ့ပို့စ်… မတင်ဖြစ်တဲ့ပုံ …(၂)